Nyanzvi pedicure - Maitiro aunogona kuzviita nhanho nhanho | Bezzia
Susana godoy | 12/09/2021 20:00 | Runako
Iwe unoda here kuwana nyanzvi pedicure? Saka hapana chakafanana nekutevera akateedzana matanho akakosha uye kuzvimisikidza iwe kuti uzviite zvakanaka mumba mako. Nekudaro, iwe uchave uine yakasarudzika nguva yako, kuti unakirwe yakasarudzika nguva uye uwane mhedzisiro mhedzisiro yezvipikiri zvako, nekuti tsoka dzako dzinozvidawo.
Ichokwadi kuti mumwaka wezhizha tinowanzo chipa kukoshesa, asi kunyangwe mwaka wematsutso ukauya, hatifanire kuurega uchitiza. Nekuti iyo tsoka kutarisirwa zvakare yakakosha uye nekuda kwechikonzero ichocho, isu tinofanirwa kuzviita gore rese. Usatadza kuzviita sei nekuti izvozvi tinokuudza zvese.
1 Gadzirira tsoka yekugeza
2 Professional pedicure: Cheka uye faira zvipikiri
3 Chengetedza cuticles uye zvitsitsinho
4 Sarudzo yeiyo enamel
5 Kubata kwekupedzisira
Gadzirira tsoka yekugeza
Mune zvimwe zviitiko haisi inhanho yekutanga nguva dzose, asi mune yedu ndiyo. Nekuti nenzira iyi tinogona kuita kuti ganda rinyoro kana zvasvika pakubvisa kumwe kusakwana. Nekudaro, hapana chakafanana nemvura shoma inopisa mumudziyo muhombe unotibvumidza kuisa tsoka mbiri. Iwe unogona kuwedzera madonhwe mashoma emafuta akakosha kuti uone kuchema kwese asiwo kuzorora kwakakwana. Saka, unofanirwa kumirira kusvikira mvura yatonhora. Saka iwe unogona kugara uchitora mukana wekuita mabasa pakombuta kana chero chaunoda.
Professional pedicure: Cheka uye faira zvipikiri
Mushure mekugezesa nekuomesa tsoka dzako, inguva yekuenda kunocheka nzwara. Rangarira kuti zvirinani kusavapa maumbirwo akakomberedzwa nekuti anogona kuita munyama, asi iwe unogona kunakidzwa nekucheka kwakaringana, kuitira kuti gare gare kana zvasvika pakara zvioneke zvakanyanya kufanana. Ehezve, kuwedzera kune iyo yakatemwa pachezvayo, iwe unofanirwa kuiisa faira. Sezvo danho iri rakakosha kuti ukwanise kubvisa zvakashata zvikamu kana micheto iyo inogara ichibuda.
Chengetedza cuticles uye zvitsitsinho
Cuticles chimwe chikamu chakakosha chemaoko nemaoko.. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuvachengeta kana iwe usiri kuda kuvabvisa. Izvo zvauchazoita kuisa madonhwe mashoma emafuta pane yega yega. Zvekuti tigone kuvapfavisa. Tora mukana uye kwiza tsoka yese, uchisimbisa chikamu chezvitsitsinho. Nekuti ndeimwe iyo inogona kutipa matambudziko uye kuoneka kumwe kutsemuka. Nekudaro, iwe unofanirwa kuisa hydration uye enda kune pumice dombo kuti utaure zvakanaka kune rakafa ganda. Paunenge wapedza, isa moisturizer.
Sarudzo yeiyo enamel
Dzimwe nguva tinogona kuisa polish pazvipikiri kana zvisina kugara zvichipera. Kana zvisiri, iwe unogona ikozvino kubheja padanho rekupedzisira, iko iko kushandiswa kwevara. Kunyangwe yapfuura, iwe unofanirwa kuwedzera dziviriro uye kuibata yakaoma. Ichave nguva yekusarudza iyo enamel. Iwe unogona kugadzira yakatsetseka dhizaini kana kuti ipe iyo yekubata kwekufungidzira uye enda kune yekugadzira dhizaini, semuenzaniso, mune mbambo yechigunwe chikuru chetsoka. Chero chipi chaunosarudza, chipende uye chiite kuti dziome zvachose. Kana uchinge waoma, iwe unofanirwa kuisa dura rekupenya kuti mhedzisiro yacho itonyanya kurova uye igare kwenguva yakati rebei.
Kana tangoisa iyo enamel, ichokwadi kuti isu tinofanirwa kuisiya iome chaizvo. Asi pane imwe nhanho yekupedzisira yatinofanira kutora uye ndokunge, zvakare tinoda kubheja pane yakatetepa yeanodzikisira pese petsoka. Ichokwadi kuti raitova danho ratakatora asi harizove rekupedzisira. Iyo inowedzera hydration, zvirinani saka inguva yekubheja pairi. Iye zvino uchave nehunyanzvi pedicure yekugona kuzviisa mukushandisa chero nguva uye chero kwaunoda. Ichokwadi kuti haizove akaomarara sezvaizoita senge!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Nyanzvi pedicure: Maitiro ekuzviita nhanho nhanho
Perm eyelash: Zvese zvaunoda kuti uzive